China acrylic girazi jira vagadziri uye vanotengesa | Gokai
Acrylic girazi pepa
Ukobvu 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... kusvika 100mm
Ruvara Chero chero ruvara rwakanaka, senge yakajeka, yechando, opal, chena, tsvuku, bhuruu, nhema, nhema uye chena, masikati nehusiku husiku, girazi, nezvimwe. Tinogona zvakare kugadzira rakasarudzika ruvara zvichienderana nezvinodiwa zvako zvakakosha.
Hunhu Yedu acrylic magirazi machira anoenderana neEC / SGS / RoHS zviyeuchidzo
1.We tiri nyanzvi acrylic girazi mutengesi neanopfuura makore gumi ekunze ruzivo ；
2. Kugutsikana kwedu kwemusika wechigadzirwa kwakakwirira kupfuura 95%.
3. Tine CE uye SGS yakasimbiswa kambani.
4. Redu Ruvara acrylic girazi jira hariparari mumakore 8-10 ekushandisa kwekunze.
5.Yedu acrylic girazi jira ukobvu kushivirira ishoma pane ± 0.1mm.
6. Yedu acrylic girazi jira rine simba rakanakisa uye yepamusoro kemikari kuramba.
7. Kugadzirisa kwedu kunowanikwa: anti-UV. tungamira mahara, inonzwika-yakadzivirirwa, et
8. Tiri kubasa kwako maawa makumi maviri nemaviri online.
9. OEM neODM zviripo.
Pashure: acrylic epurasitiki jira
Zvadaro: kukanda acrylic jira
Acrylic Sheet Kukanda
Kanda Acrylic Sheets padyo neni